UK kubvisa zviyero zvinotenderwa zvePCR kune vafambi vakabaiwa jekiseni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » UK kubvisa zviyero zvinotenderwa zvePCR kune vafambi vakabaiwa jekiseni
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Iyo PCR yekuyedza hutongi yakaratidza kuti haina basa, inodhura uye chinhu chikuru chinopa kunonoka kukuru pamiganhu. Izvo zvakare pane dzimwe nguva hazvina musoro.
UK kupedzisa bvunzo dzePCR kune vafambi vakazara.
ETOA inorumbidza danho revatungamiriri veUK kupedza chirongwa chePCR bvunzo,
Kubviswa kwezvinodiwa kuti ubaye majekiseni maviri "ndiko kugamuchirwa".
Sezvo fungidziro inotenderera pamusoro pekubviswa kweinotenderwa bvunzo dzePCR kune vakabata majekiseni maviri muUK Tom Jenkins, CEO weETOA, ataura zvinotevera.
“Hutongi hwePCR hwaratidza kuti haubatsiri, hunodhura uye hwakakonzera kunonoka kukuru kumiganhu. Izvo zvakare pane dzimwe nguva hazvina musoro. Chero ani anofamba kubva kuUK kwemaawa asingasviki makumi matatu nemasere anofanira kutora bvunzo yavo "pre kusvika" kuUK, kuratidza kuti vakachengeteka kudzokera kuUK. Saka kubviswa kwayo kune avo vakabaiwa majekiseni maviri kunotambirwa.
Tom Jenkins, CEO weETOA
“Asi zvakakosha kuti zororo iri riwedzerwe kune vese vashanyi vakabayiwa majekiseni maviri, kwete maBrits chete. Iyo UK yakazvitsaura pachayo kubva kune vanouya vashanyi uye yatsvedza kuseri kwenzvimbo dzese muEurope semhedzisiro. Ipo iyo £ 30 bhiriyoni inouya indasitiri yekushanya yakatambura kurasikirwa kwakaperera mumakore maviri apfuura, tinoda kukurumidza kugadzirisa chimiro chedu senzvimbo yekutambira uye yakananga kushanyira. "Kana nguva yakanonoka ikawanda, kukanganisika kwehupfumi hweUK."
Parizvino, kuti upinde muUK, mufambi anofanirwa kuve nehumboo hweyakaipa COVID-19 bvunzo panhandare yako yekuenda, inotorwa mukati memazuva matatu ekuenda kwako kuEngland. Muedzo unofanirwa kusangana nemitemo uye zviyero zvakatsanangurwa neHurumende yeUK.
ETOA (European Tourism Association) isangano revatengesi revashanyi nevashambadzi kunzvimbo dzekuEurope, kubva kumakambani epasi rose kusvika kumabhizimusi emuno akazvimirira.